London way hadashee Hargeysa ayay ku hadhay
Monday, 06 March 2017 01:14
Bulshada Reer Somaliland ee ku dhaqan UK, siiba London, waxay dareenkooda wadaninimo ku muujiyeen mudaaharaad ballaadhan oo selmi ah oo ay kaga soo horjeedeen saldhiga Military ee xukuumadDa MURDISO ku xaraashtay BERBERA una gacan gelisay dawlad yar oo Carbeed . Waxa muuqata inay Somaliland ka qayb geli doonto dagaal Carbeed ” Arab Conflict ” oo lagu gubay Syria, Libya, Egypt, Lebnanon, Yemen iyo Iraq . Waxa muuqata in madaarka Berbera laga gani doono sawaariiq lagu tuuro dalka Yemen oo ay ku hooban doonaan dad muslim ah oo u badan dumar iyo caruur . Waxa lagu gumaadi doona shacab “ Zaydiyiin” ah oo ku abtirsada “ Binu Hashim” iyo tafiirtii “ Fadumo Binta Rasuul “. Xarakada loo yaqaano “ Xuutinyiintu” maaha urur argagixiso ah sida “ Al Shabaab, Al Qaacida iyo ISIS”. Waa urur u dagaalamaaya xuquuqdooda siyaasadeed “ political rights “ sidii SNM ula dagaalantay daaquudkii Siyaad Barre.Hadaba, haddii Berbera duulaan lagaga qaado , waxa hubaal ah inay weerar kusoo qaadi doonaan xeebaha Somaliland, siiba Berbera. Weerarkaasi wuxuu saamayn dhaqaale ku yeelin doonta ganacsiga Bada Cas iyo dhoofinta Xoolaha Nool ee loo dhoofiyo Saudi Arabia ”. Ururka Xuutiyiintu waxay haysataan “ Scud Missiles “ rido dheer soo gaadhi kara Berbera iyo Hargeisa dhulkana la simi karaa. Waxay soo liishaami karaan Qasriga Madaxtooyada iyo goobaha dibirku ku caweeyo sida Mansour Hotel.Noocyada Scud Missiles ee Xuutiyiinntu haysato ee lagu burburin karo Berbera iyo Hargeisa waxa ka mid ah :
1). Scud-B (SS-1C; Hwasong-5) oo ridadiisu gaadhayso 300 KM.
2. Scud-C (Hwasong 6), oo ridadiisu gaadhayso 600 KM.
3. SS-21 Scarab (Tochka) oo ridadiisu gaadhayso 900 KM.
4. C-802 (CSS-N-8 Saccade) oo ridadiisu gaadhayso 2000 KM
Waxaan shacabka Somaliland, siiba Reer Berbera & Reer Hargeisa ugu baaqaaya inay u heliyaan dalkooda, dadkooda, diintooda iyo dameerkooda oo ay kacdoon shacbi ku sameeyaan Xukuumadda MURDISO ee dad iyo duunyaba xaraashtay.
More in this category: « Fadlan u fiirso Liiskan hoose ee Hantida Maguuraanka ah ee Xukuumada Siilaanyo Xaraashtay . Qalinkii A/rahman Fidhinle UK . Jammaludin Mustafa, The New Ethiopian Ambassador to Somalia is a Wolf in Sheep’s Clothing »